Goolhaye ugu hanjabay inuu ka tagayo Man Utd –
Home SUUQA IIBKA Goolhaye ugu hanjabay inuu ka tagayo Man Utd
Goolhaye ugu hanjabay inuu ka tagayo Man Utd
Dean Henderson ayaa u sheegay Manchester United inuu raadin doono inuu ka tago, haddii uusan awoodin inuu noqdo gool hayaha koowaad David de Gea isagoo ah goolhayaha koowaad ee kooxda.
Henderson ayaa ku soo laabtay Old Trafford ka dib markii uu xilli ciyaareedkii hore amaah ugu qaatay kooxda Sheffield United.
Goolhayaha reer England ayaa sidoo kale dhawaan saxiixay heshiis cusub oo shan sano ah oo uu isbuucii ku qaadan doono ,000 120,000.
Xikmad ma noqon laheyd inaan fariisto oo aanan ciyaarin kubada cagta, uma maleynayo inay caawin doonto dhinac kasta haba yaraatee.
“Ma horumarin doono kaliya inaan fadhiisto kursiga keydka. Waxaan u baahanahay waqtigaas ciyaarta. Waxaan dareemayaa sida saxiixa cusub ee United. Anigu shan sano kuma aan jirin dhismaha. Waqti badan ayaa iga maqnaa.
United ayaa ciyaari doonta seddex kulan oo Premier League ah ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga bisha Oktoobar 5 – muddadaas oo cadeyn doonta go’aan qaadashada, madaama Henderson uu miisaamayo mustaqbalkiisa.